एक्वीटाइन: ऐतिहासिक २० novel० पुरस्कारको उपन्यास विजेता | वर्तमान साहित्य
एक्वाटाइन स्पेनमा सबैभन्दा बेच्ने लेखकको सबैभन्दा नयाँ पुस्तक हो: ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी। २०२० मा प्रकाशित, यो एक मध्ययुगीन ऐतिहासिक कथा उपन्यास हो, जसको मुख्य चरित्र एक्वाटेनको एलेनोर हो - जसलाई एलेनोर पनि भनिन्छ - जसले आफ्नो बुबा, पीटियसको ड्यूक गुइलहम एक्सको हत्याको पछाडि के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दो प्रयास गर्नेछ।
प्लॉट वरिपरि ईन्ग्मास, सिगिलहरू, बदला र यहाँसम्म कि अनाचारले घेरिएको छ। यदि त्यहाँ सिंहासनहरूको खेल रहेको छ भने, यस कथामा त्यहाँ धेरै लडाईहरू हुनेछन्, जसमा एक मायालु त्रिकुटु पनि समावेश छ। यस पुस्तकको साथ लेखकले आफूलाई साहित्यिक क्षेत्रमा स्थापित गरे, पुष्टि भयो भन्ने तथ्य २०२० मा ग्रह पुरस्कार प्राप्त गरेर।
1 सारांश एक्वाटाइन (२०२०)
1.1 एक रहस्यमय मृत्यु
1.2 बदलाको योजना
1.3 एक अप्रत्याशित मोड
2 एक्वाटाइन विश्लेषण (२०२०)
2.3 उपन्यासको तयारी
3 लेखक को बारेमा
3.1 अध्ययन र कार्य अनुभव
3.3 इवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी द्वारा पुस्तकहरू
सारांश एक्वाटाइन (2020)
एक रहस्यमय मृत्यु
1.137 मा, गुइलहम एक्स, "एक्वाटाइनको ड्यूक", कम्पोस्टेला सम्म लामो यात्रा पछि। क्याथेड्रलको मुख्य वेदीको अगाडि आइपुग्छ, अप्रत्याशित रूपमा मरे. तपाईंको छाला -के निलो हुन्छ- "रगत चील" द्वारा चिनो लगाइएको छ, नर्मन्डीमा लागू गरिएको एक प्राचीन यातना। सबै अवलोकन गर्दछन् कि नेताको रहस्यमय मृत्युले छक्क पारेको छ।
सबैभन्दा प्रभावित व्यक्ति मध्ये एक हो उनकी छोरी: डचेस इलेनोर, Who, con मात्र 13 वर्ष, राज्यको अधिकार लिनै पर्छ। उनको भनेर जोड दिन्छ उसको बुबा क्याप्टियनहरूले मारेका थिए (फ्रान्सको राजा लुई VI का आफन्तहरू), एक्वेटाइन भूमिमा तिनीहरूको ठूलो चासोको कारण।
जे भयो त्यो सबैको नतिजाको रूपमा, सिंहासनको उत्तराधिकारीले बदलाको चिसो योजना बनाउँदछ जसको साथ उनले फ्रान्सेली राज्यमा प्रवेश गर्ने र उनको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने छन। यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न, ती युवतीले आफ्ना बुबाहरूको ईच्छा झूटा बनाउँछिन्। कागजातले संकेत गर्दछ ड्युक को इच्छा को रूप मा उनको छोरी बीचको विवाह y बच्चा राजा (Luy VII), फ्रान्स को राजा लुई छठी को छोरो।
उनको रीस शुरू गर्नु भन्दा पहिले, डचेसले एक जवान पुजारीको लागि योजना गरेका सबै कुरा स्वीकार गर्नेछन्, जसले एक अप्रत्याशित पहिचान कायम राख्छिन्।
एक अप्रत्याशित मोड
उनी आइपुग्दासम्म लियोनोर सवारी हुन्छन् फ्रान्स को सम्राट Luy VI, "फ्याट किंग" को रूपमा परिचित। यो, तुरून्त, डचेस र उनको छोरोबीच विवाहको प्रबन्ध गर्छ। समारोह को भोजको समयमा, अचानक एल रे गुइल्हेम एक्सको जस्तै परिस्थितिमा मृत पतन हुन्छ। यसले लियोनोरको श cr्कालाई छोडिदिन्छ, जो अब जवान लुइसँगै फ्रान्सको नेतृत्व गर्नुपर्दछ।
दुवै जना असामान्य मृत्युको बारेमा चिसो जाँच शुरू गर्नेछ यी महत्वपूर्ण मान्छे को। यसका लागि, तिनीहरू एक्विटानियन बिरालाहरूतिर फर्कन्छन्, को पौराणिक जासूस ड्यूकहरूको। युवा र अनुभवहीन राजाहरू धेरै परिस्थितिहरूबाट पार गर्नुपर्नेछ। यस यात्रामा, केटा - जसलाई दशकौं अघि जंगलमा छोडिएको थियो - ले एक खुलासा गर्ने भूमिका खेल्नेछ।
एक्वाटाइन: ग्रह पुरस्कार ...
Análisis एक्वाटाइन (2020)
यो एक छ ऐतिहासिक उपन्यास कल्पनासँग पूरक, सेट प्राय फ्रान्सेली क्षेत्र मा। तिनीहरूकोमा १००० पृष्ठहरू, कथा सुविधाहरू Parts भाग, बदले मा विकसित २ short छोटो अध्यायहरू। काममा दुई प्रकारका कथाहरू छन्: पहिलो व्यक्ति, लियोनोर र लुई द्वारा; y en तेस्रो व्यक्ति, एक सर्वज्ञानीय rapporteur द्वारा।
बास्क साहित्य Aquitaine को एलेनोर को जीवन को एक दशक कब्जा, एक असाधारण इतिहास को साथ एक महिला - उनी तीन महत्वपूर्ण यूरोपीयन राज्यको नेतृत्व गर्न आए। कथानकले मृत्युको रहस्यलाई पूरक बनाउँछ समयको दुई महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको काल्पनिक तथ्य संग। थप रूपमा, उनले अन्य व्यक्तिगत र बाह्य मुद्दाहरूमा अन्वेषण गर्दछ जुन कथालाई विभिन्न बारम्बार दिन्छ।
ईवाले आफ्नो ऐतिहासिक उपन्यासहरूको लागि ठूलो प्रतिष्ठा निर्माण गरेको छ; पहिलो, कथाको गुणस्तरको लागि; र दोस्रो, तयारीको लागि उहाँ आफ्नो पुस्तकहरूको तयारीको अघि र समयमा गर्नुहुन्छ। को प्लट को अन्त मा एक्वाटाइन, लेखकले धेरै पृष्ठहरू समर्पित गर्दछ विस्तृत कागजात वर्णन गर्न। तिनीहरुमा, १०० भन्दा बढी पुस्तकहरू पढेको दाबी गर्दछ र एक्वेटाइन क्षेत्र कुन समयमा उसको यात्राको विवरण दिन्छ।
यस भ्रमणमा उनले बोर्डेक्स, पोइटियर्स र फोन्टेभ्राउल्टको एबी भ्रमण गरे जहाँ एक्वैटाइनका एलेनोर मरे र उनलाई गाडिदिए। त्यहाँ समयको चलन र गैस्ट्रोनोमीको बारेमा अनुसन्धान गरियोजुन उनले कथालाई थप यथार्थता प्रदान गर्नमा जोड दिए। उनले एक प्रबुद्ध पाठ्यक्रम पनि लिए, जुनमा उनले भिक्षुहरूले मध्ययुगीन पाण्डुलिपिहरू कार्यान्वयन गर्ने कलाको बारेमा सिके।
Sáenz de Urturi थपियोaवर्णहरूको ठूलो समूह उपन्यास - वास्तविक, अधिकांश भाग को लागी। अलग देखिनु, स्पष्ट कारणहरूको लागि, यसको नायकहरूः लियोनोर र लुई; यद्यपि लेखकले दुय्यम चरित्रहरूलाई बेवास्ता गरेनन, तर उनीहरूलाई उत्कृष्ट संरचना र उत्तम परिभाषित मन्दिरहरू दिए। पछिल्लाहरू मध्ये बाहिर उभिन: रेमंड डि पोइटियर्स - नायक काका- "बच्चा", Adamar र Galeran।
एक्वाटाइन त्यो उपन्यास हो ha धेरै हलचलको कारणविचार गरीरहेको बिन्दुमा एक साहित्यिक घटना। यद्यपि कुनै पनि काम जस्तै यसमा विघटनकर्ताहरू छन् जसले तर्क गर्छन् कि धेरैजसो ऐतिहासिक सामग्री हराइरहेको छ। हाल, वेबमा पाठकहरूद्वारा पाठको 72२% स्वीकृति छ।
यसको ,,5.807०XNUMX अमेजन रेटिंग्सले यसलाई यसमा राख्छ फ्रान्सेली साहित्य कोटी मा बिक्री मा पहिलो स्थान। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई weight.२ / of औसतको साथ उच्चतम तौलका साथ मूल्या rate्कन गर्छन्। यो ध्यान दिनु पर्छ त्यो% 48% काममा stars तारे दिए, र १ 14% मात्र प्रदान गरियो stars तारा वा कम।
इवा गार्सिया सेन्ज दे उर्तुरीको जन्म २० अगस्त, १ 20 ;२ मा भिट्टोरियामा भएको थियो, जुन बास्क देशको सब भन्दा सुन्दर मध्यकालीन इलाका थियो; एक वकिल र एक शिक्षक को छोरी। उहाँ १ 15 बर्षको उमेर सम्म आफ्नो गृहनगरमा बस्नुभयो, पछि आफ्नो परिवारसँग एलीकान्टे सर्नको लागि, शहर जहाँ तपाईं हाल निवास गर्नुहुन्छ।
ईवा गार्सिया सेन्ज द्वारा उद्धृत।
दुबै उनको बाल्यकाल र किशोरावस्थामा, उनी एक उत्सुक पाठकको रूपमा चिनिन्थ्यो। १ 14 वर्षको उमेरदेखि उनले लेख्न थाले, यो सान भिएटर स्कूलमा उनको साहित्यको प्राध्यापक को थियो को प्रभावलाई धन्यवाद। समय पछि, महत्वपूर्ण स्पेनिश संस्थानहरूमा रचनात्मक उपन्यासको साहित्यिक पाठ्यक्रमहरू लिए। त्यस समयमा उनले धेरै छोटो कथाहरू लेखेका थिए जससँग उनले केही प्रतिस्पर्धाहरू जितेका थिए।
अध्ययन र कार्य अनुभव
व्यावसायिक रूपमा, उनले अप्टिक्स र अप्टोमेट्रीमा डिग्री अध्ययन गरे, जबकि उनले त्यो क्यारियर अभ्यास गरिरहेका थिए - २ 27 वर्षको उमेरमा - उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनी चलाउन सके। यस क्षेत्र मा १० बर्ष पछि, उनले Alicante विश्वविद्यालय मा काम गर्न शुरू गर्नुभयो। २०० of सम्म उनी साहित्यमा फर्के; मैले केही लाइनहरू अनुसन्धान गरेर लेखेको थिए जुन तीन बर्ष पछि उसको पहिलो पुस्तक हुनेछ।
2012 मा, बास्क लेखक स्वयं प्रकाशित मञ्चमा उनको पहिलो उपन्यास Amazon: पुरानो परिवार: लामो समयसम्म बाँचेको गाथा। यस ऐतिहासिक कथाले हजारौं अनुयायीहरूको ध्यान खिचे, जुन कारण एक पल मा महान साहित्यिक उत्थान। २०१ 2014 मा, उनले यससँग जीवविज्ञान पूरा गरे: आदमका छोराहरू र आफ्नो तेस्रो पुस्तक प्रस्तुत: ताहितीको लागि यात्रा; दुबैको सफलता पछि उनले आफूलाई साहित्यमा पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने निर्णय गरे।
२०१ 2016 मा उनले यो रिलीज गरे सेतो शहर त्रिकोण, श्रृंखला जससँग साहित्यकारले लाखौं पाठकहरू प्राप्त गरे र त्यो उनलाई लगे लेखक बन्नको लागि अत्यधिक बिक्री भएको. चार बर्ष पछि, श्रृंखला मा पहिलो पुस्तक: सेतो शहर को मौनता, डेनियल Calparsoro द्वारा सिनेमा अनुकूलित थियो। कडा परिश्रम र कागजातको लामो समय पछि, आफ्नो नवीनतम उपन्यास प्रस्तुत: एक्वाटाइन (2020)।
इवा गार्सिया सेन्ज डे उर्तुरी द्वारा पुस्तकहरू
सागा दीर्घकालिका म: पुरानो परिवार (2012)
The Saga of the Long-live II: एड्सको पुत्र (2014)
ताहितीको लागि यात्रा (2014)
व्हाइट सिटी त्रयी I: सेतो शहर को मौन (2016)
सेतो शहर त्रिकोण II: पानी का संस्कारहरू (2017)
व्हाइट सिटी त्रिकोण III: टाइम लॉर्ड्स (2018)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » एक्वाटाइन
बर्ना गोन्जालेज हार्बर। एल पोजोका लेखकसँग अन्तर्वार्ता